[Zawgyi] ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရည်အချင်း၊ စွမ်းရည်၊ ပါရမီတွေကို ဘယ်လိုထုတ်ဖော်မလဲ။ အမြဲတမ်း ကြိုးစားနေမယ်။ ရလဒ်တွေကို စမ်းစစ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ထုတ်ဖော်ကြည့်ပါ။ အဲဒီ့စွမ်းရည်တွေကို လေ့ကျင့်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ယော...
How do I transition from beingastudent to professional life?
ကျောင်းသားဘဝကနေ အလုပ်ခွင်စဝင်တဲ့ အကူးအပြောင်းကာလမှာ ဘယ်လို ပြုမူသင့်သလဲ။ ကျောင်းသားဘဝကနေ ပညာရှင်ဘဝသို့ အကူးအပြောင်း တက္ကသိုလ်ပြီးလို့ ကျင်းပကြတဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်တွေကို "ဘဝအစအတွက် ကျင်းပတဲ့ပွဲ" ကို ခေါ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ "ဘဝအစ"ဆိုပြီး ရွေ...
What is the secret of career happiness?
အလုပ်ခွင်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ လျှို့ဝှက်ချက်များ ၁။ မေးမြန်းဖို့ သတ္တိရှိပါစေ။ ဒလိုင်းလားမား ပြောသလိုပေါ့၊ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ အဆင်သင့် လုပ်ယူပြီးသားအရာ မဟုတ်ဘူး၊ သင့်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကပဲ အဆုံးအဖြတ်ပေး...
I do not have an overseas graduate degree. How do I make up for this?
နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့မရရထားဘဲ အလုပ်ကောင်းကောင်းရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေ ဘွဲ့ရတာဟာ သင်ကို ထူးချွန်တဲ့ ပညာရေးနောက်ခံနဲ့ အတူ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုကို သေသေချာချာကျွမ်းကျင်စေပြီး တွေးခေါ...
How to earn the trust of your boss and peers at your workplace?
အလုပ်မှာ သူဌေး နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုရအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ။ "ယုံကြည်မှုဆိုတာ တည်ဆောက်ယူရတဲ့အရာမျိုးပါ။ ဘယ်သူမှ အလကား ပေးတာ မဟုတ်ဘူး" ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အပြောအဆို၊ အလုပ်အကိုင်ကတစ်ဆင့် ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက...
Have you written an email and wondered why you are not gettingafast response?
ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့ အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို ဘာလို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အကြောင်းမပြန်ပါလိမ့်လို့ တွေးမိဖူးပါလား။ အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အီးမေးလ်ဟာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု မရှိလို့ပါ။ အီးမေးလ်ပေးပို့တဲ့သူကို မလိုအပ်တဲ့ အချက်အလက် အမျ...
How do you solve problems that are inevitable in life and at work?
မိမိ နေထိုင်နေတဲ့ ဘဝမှာနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကြံုတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ။ သင်ဟာ ကြံုတွေနေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ကောင်းကောင်း ဖြေရှင်းနိုင်သူ တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အဖွဲ့မှာ သင်ဟာ မရှိမဖြစ် အဖိုးတန်လေး တစ်ဦး ဖြစ်နေမှာပါ။ "ဝိုင်း...
How do you handle when you were given tasks and you were unable to perform?
မနိုင်ဝန်တွေ ပိလာတဲ့ အခါ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက်တွေ တင်းကျပ်တတ်တာကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ စောစောစီးစီး အကျိုးအကြောင်းကို ရှင်းပြတာဟာ နောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ အတွက် အဆင်ပိုပြေ စေတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အခက်အ...
How should I handle criticism?
လူအများစု အတွက်ကတော့ ဝေဖန်အကြံပြုမှုဆိုတာ စိတ်နာကျင် စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းမှန်ရင် ဝေဖန်သူရော၊ ဝေဖန်ခံရသူ အတွက်ပါ အကောင်းဖြစ်စေမှာပါ။ ယခု ʺဝိုင်းʺ အဖွဲ့သားများမှ သင့်ရဲ့ ဝေဖန်အကြံပြုမှု အတွေအကြုံကို အပြုသဘောဆောင်ရန် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့...
How can I deliver clear and understandable instructions?
ရှင်းလင်း ပြတ်သား ပြီး နားလည်လွယ်သော ညွှန်ကြားချက်တွေ ဘယ်လိုပေးကြမလဲ။ ညွှန်ကြားခြင်း သည် မေးမြန်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် နားလည်ခြင်းတို့ ပေါင်းစပ်ထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ညွှန်ကြားချက်ပေးနိုင်ခြင်းသည် လုပ်ဆောင် မည့် အလုပ်...
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပြောဆိုတင်ဆက်မှု စွမ်းရည် (Presentation Skills) ဟာ နယ်ပယ်စုံမှာ လိုအပ်ပါတယ်။ အခြားသူများကို သင်သိစေလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ထိရောက်ရှင်းလင်းစွာ တင်ဆက်တတ်ဖို့က သင့်ရဲ့ ယူဆချက် အတွေးအမြင်တွေကို ကြားနိုင်စေဖို့ အဓိက လိုအပ်ချက်ပါ။ အခု ʺဝိုင်းʺ...
How do I build good working relationships?
အလုပ်ခွင် ဆက်ဆံရေး ဘယ်လိုကောင်းမွန် အောင်တည်ဆောက် ကြမလဲ ? လူ့အသိုင်းအဝိုင်း တွင် လိုက်လျှော် ညီထွေ စွာနေတတ်မှူနှင့် စည်း လုံး မှူကို တန်ဖိုး ထား ကြ ပါသည်။Wynee မှ အလုပ်ခွင်တွင် အသုံးဝင် နိုင် မည့် အချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်&he...